Suldaan Xaydar oo booqasho ku tagay degaanka Maringubay oo ka tirsan degmada Baraawe.
Waxaa maalintii jimcaha ahayd ee taariikhdu ahayd 8/2/08,booqasho salaam ah ku tagey tuulada maringubaay Suldaan xeydar suldaan Suufi Suldaan Munye,waxaa halkaasi si xamaasad ku jirto Ugu soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan deegaankaas,oo ka koobnaa Culimaa’udiin Indhergaradka odeyaasha dhaqanka,ururada haweenka. Waxaana halkaas barbaarta gaashaaman ay ugu sameeyeen xaflado damaashaad ah.
Waxaana damaashkaas kadib khudbado halkaas ka soo jeediyey ugu horeentii Guddoomiyaha tuulada Maringubaay,iyo Nabadoon Abuukar Cumar Maxamed (Gameele) oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in muddo 17 sanno kadib uu maanta degaankooda soo booqdo Suldaanka guud ee beelaha Baraawe ayna nasiib u yeesheen inay la kulmaan iyagoo siiyay warbixin guud oo ku saabsan xaaladda ay ku nool yihiin dadka degaanka. intaas kadib waxaa isna halkaas khudbad ka jeediyay Suldaan xaydar oo sheegay inuu ku faraxsan yahay sida diiran ee dadweynaha degaanku u soo dhoweeyeen wuxuuna suldaanku u sheegay dadweynahii halkaas isugu soo baxay inuu u gudbin doono baahidooda jaaliyadaha dibaddaha ku nool iyo hayadaha samafalka sidii ay wax uga qaban lahaayeen baahida dhinaca caafimaada,beeraha, iyo waxabarshadaba oo ay dadka degaanku qabaan.
Wafdigii kulaankas goob joogga ka ahaa waxaa ka mid ah Nabaddoon Sayidiina Xaajiyow Nuurki,Abuukar Gameela , Nabadoon Aw Nuunow , Dr Aweys Sheekh Mumin,Taliyaha booliska degmada baraawe Gaashaanle Khaasim Sheekhuna Maye iyo Masu’uliyiin kale oo ka socotay maamulka degmada barawe.